Home Wararka Maxay ahayd ujeedada kulankii qarsoodiga aha ee dhexmaray safiirka Iiraan & Kheyre
Maxay ahayd ujeedada kulankii qarsoodiga aha ee dhexmaray safiirka Iiraan & Kheyre
Mudo laga joogo labo asbuuc ayaa Xasan Kheyre waxa uu kulan qaraoosi ah oo laga qariyay saaxiibdiisa gaarka uu la yeeshay safiirka Iiraan u joogo dalka Kenya
Sida MOL loo xaqiijiyay kulanka uu Kheyre la qaatay safiirka dalka Iiraan Dr. Jafar Marmaki ayaa ahaa mid uu codsaday Xasan Kheyre.
MOL waxaa ay heshay xog rasmi ah oo ku saabsan kulanka Xasan Kheyra la qaatay safiirka Iiraan. Kheyre ayaa ka codsaday dalka Iiraan in ay siiyaan kaalmo Dhaqaale iyo mid siyaasadeed uu uga qaybgalo uguna guulaysto doorashada Soomaaliya.
Kheyre ayaa u sheegay safiirka Iiraan Dr. Jafar Marmaki in uu xiriirka Iiraan dib ugu soo celin doono mudo sadax bilood ah, isla markaana uu si buuxda u fasaxi doono hay’adda Imam Khomeini Relief Foundation in dalka ka howlgasho.
Iiraan ayaa in mudo ah waxa ay doonaysay in ay dalka Soomaaliya ku fidiso caqiidada shiicada, iyada oo dalka ka furtay masaajido, Dhalinyaro badana ay ka bixiyeen dhaqaalaha guurka. Dowladii Xasan Shiikh ayaa dalka ka ceyriyay Iiraan iyada oo la xiray qaar kamida masaajida shiicada.
Kheyre oo horay safar ugu tagay dalka Ruushka ayaa waxa uu u Muqadaa mid taageero ka raadinaya dal kastaa oo uu u arko in uu kaalmo ka helayo isaga oo marnaba ka fakaraynin danaha dalka iyo dadka.